Wararka Maanta: Axad, Oct 7 , 2018-Wasiirka shaqo galinta Somaliland oo xukun maxkamaddi soo saartay doonaysa in dib loogu noqdo dacwaddii
Axad, October, 07, 2018 (HOL) – Wasiirka wasaarada shaqogalinta iyo arrimaha qoyska ayaa dalbatay in dib loogu noqdo xukun maxkamadda Hargeysa ka soo baxay oo laba muwaadin loogu xukumay xaquuq ay ku lahaayeen hay’adda Africa releaf oo iyadu diidan inay bixiso.
Labadan muwaadin ayaa ka shaqayn jirey dugsiga kuweydiga ee hoostaga hay’adda African Relief Committee,kuwaas markii shaqada laga eryey dalbaday xaquuqdii mudadii ay u shaqayanayeen, waxaanay dacwad ka furteen wasaarada shaqo galinta waaxdeeda xalinta khilaafaadka loo shaqeeyaha iyo shaqeeyaha, taas oo u xukuntay inay bixiyaan xaquuqda ay ku lahaayeen mudadii ay u shaqaynayeen hay’adaasi, balse hay’adaasi diiday inay bixiso.
Dacwad kale oo ay ka qorteen maxkamada gobolka Maroodi jeex ayaa soo saartay xukun ah in labadaasi muwaadin la siiyo xaqii ay ku lahaayeen hay’adaasi African Relief Committee oo ay muddo shan sanno ah macalimiin ka ahaayeen dugsigaasi ay maamusho.
Hay’adda African Relief Committee oo diiday inay bixiso xaqa loo soo xukumay labadaasi wiil ayaa wasiirka shaqo galinta ka dacwooday ka dibna wasiirkii waxay isku dayey inay joojiso labadii xukun ee midna wasaaradeedu soo saartay midna maxkamadda gobolka Maroodi, waxaanay waraaq u qortay maxkamada sare ay ku dalbanayso in dib loo eego xukunkii ay hore wasaaradeedu usoo saartay ee labadaasi muwaadin xaqoodii loogu xukumay.
“Waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa in ay si waafaqsan xeerka habka madaniga ah ay dib u eegaan go’aanka ku taariikhaysan 19/03/2018 ee sumadiisu ahayd WSHAB/4:00/51/2018 ee ka soo baxday xafiiska xallinta khilaafaadka shaqeeyaha iyo loo shaqeeyaha ee wasaaradda shaqo gelinta , arrimaha bulshadda iyo qoyska ee Somaliland iyo xukunka sumadiisu ahayd MGH/DML/116/2018 ee ku taariikhaysan 4/8/2018 ee ka soo baxay maxkamada gobolka Maroodi jeex oo ku saabsan dacwada u dhexeysa labada dhinac ee kala ah dacwadooyaal : 1. Xasan Cali Ibraahim iyo 2. Maxamed Cabdilaahi Nuux iyo dacwaysanne hay’adda African Relief Committee, isla markaana aad u kuurgashaan asbaabaha racfaan qaadasho ee lidiga ku ah xukunka maxkamada gobolka maroodi jeex ee sumadiisu ahayd MGH/DML/116/2018.” Qoraalkaasi codsiga ah waxa soo qoray Wasiirka wasaarada shaqogalinta arrimaha bulshada iyo qoyska Hinda Jaamac Xirsi, iyadoo maxkamadda ka dalbanaysa in xukunkaasi dhacay dib loo eego.
Xukunka ay wasiiraddu leedahay dib ha loo eego waxa xukumay, isla wasaaradda shaqo galinta iyo maxkamada gobolka Maroodi jeex, waxaana loo xukumay labadaasi muwaadin ee xaquuqdoodii ka doonaya hay’addan African Relief oo iyaduna diidan inay xaquuqdaasi bixiso kana warwaraygasi inay go’aankaasi meel mariso.
Wasiirka shaqo galinta HInda Gaandi waxay qoraalkan u gudbisay maxkamada sare, waxaanay dalbanaysa in dib loo eego go’aanada hore usoo saareen maxkamada iyo wasaaradeeddu ee xaquuqdoodii loogu xukumay labadan muwaadin, waxaanay qoraalkeeda ku sheegtay inay cabasho uga timid hay’adan African Relief ee xukunku ku dhacay.
Ilaa hada lama garanayo sabab ay wasiiradu usoo dhexgasho go’aan maxkamadeed oo dhacay iyo sabab hay’adda African Relief uga warwargayso inay aqbasho xukunkaasi oo kolba wasaarad usoo dhex maraysa si ay u duudsiiso xaquuqda ay ku yeesheen labadaasi muwaadin muddo shan sanno iyo afar sanno u kala shaqaynayey.